I-China i-FO yokuhanjiswa kweBhokisi abaXhasi kunye nabaXhasi-i-Chaolian Elektroniki
Ikhaya > Iimveliso > Inkqubo yeFiber Optic > Ibhokisi yokuhambisa ye-FO
Ibhokisi yokuhambisa ye-FO eyenziwe e-China ingathengwa kwi-Chaolian Elektroniki ngamaxabiso asezantsi. Umvelisi oqeqeshiweyo kunye nomzi mveliso weemveliso ezikumgangatho ophezulu eChina.
Le 2Port Fiber Optic Box Sc FC ST Simplex kunye ne-LC Duplex nayo ingalungisa iJack Keystone Jack. Iyakunyuselwa ezindongeni, iidesika, isetyenziswa ngokubanzi ezindlwini, kwiinkampani, kumaziko okufundisa nakwezinye iinkqubo zekhabhathi. Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye inolwakhiwo olulungileyo, olwenza ukuba lube nezatifikethi ze-UL / RoHS / CE.
I-Chaolian Electronic yenye yezobuchwephesha Ibhokisi yokuhambisa ye-FO abavelisi kunye nabathengisi e China. Umzi mveliso wethu ubonelela ngoluhlu lwamaxabiso. I Ibhokisi yokuhambisa ye-FO eveliswe ngumzi mveliso wethu yamkelwe kakuhle ngabathengi ngexabiso eliphantsi. Wamkelekile ukudibana.